sida kubbadaha birta ah
kubbadaha birta ah
kubbadaha birta kaarboon
kubbadaha saucer duulaya
kubbadaha naxaasta ah
kubbadaha la qoday
Kubbada dhoobada, kubbadda birta sidata, tartanka kubbadda birta ah + kubbadda birta Condar
by admin 22-01-12
Kangda waxay samaynaysay kubbadaha birta ah in ka badan toban sano, waxayna inta badan la kulantaa dhibaatooyin kala duwan iyo shuruudaha macaamiisha inta lagu jiro habka isticmaalka.Waxaa ka mid ah, qaar ka mid ah soosaarayaasha ayaa soo bandhigay shuruudaha kubbadaha birta ah ee looga baahan yahay alaabtooda sare: ma aha oo kaliya adagaanta sare ...
Xaalada Tignoolajiyada Kubada Biraha ee Dalkayga Halkay Marayso
by admin 21-12-01
Sida qayb muhiim ah oo ka mid ah duubista, kubbadaha birta ah waxay door ka ciyaaraan xajinta iyo gudbinta culeyska iyo dhaqdhaqaaqa xajinta, waxayna saameyn weyn ku yeeshaan nolosha xajinta iyo gariirka iyo buuqa.Meel kasta oo ku taal dusha sare ee kubbadda birta waa dusha shaqada ee culeyska qaada.Waa bea...
Ma ogtahay in 304 kubadaha birta ah aan loo isticmaali karin in lagu miyeeyo khamriga?
by admin 21-10-20
Haddii aad tahay saaxiib inta badan cabba khamriga cas, waa inaad fahamtaa inay tahay inaad kacdo ka hor inta aanad khamri cabin si ay u dhadhamiso.Haddaba maxaa dhexdhexaad ah oo loo isticmaali karaa in lagu dedejiyo xawaaraha dhimista ee khamriga cas?Waa kan Condar Steel Ball si uu kuugu sheego farshaxan-sameeyaha oo aad caan uga ah ...
Sidee loo demiyay kubbadda birta wax-qaadka?
by admin 21-09-26
Maanta, Condar Steel Ball waxay kuu sheegaysaa mid ka mid ah hababka soo saarista iyo habaynta kubbad-deminta birta sidda.Haddaba waa maxay daminta?Waa maxay qalabka loo isticmaalo deminta?Maxay yihiin taxaddarrada marka la deminayo?Hoos waxaan ku siin doonaa hordhac guud oo tixraac ah ...
Sida loo helo xigasho sax ah oo birta doorbidaysa?
by admin 21-07-29
Qiimaha kubbadaha birta ah ayaa ah arrinta ugu walaacsan ee iibsadayaasha, laakiin qiimaha kubbadaha birta kuma yimaadaan iyagoo afka kala qaadaya.Waxaan u baahanahay inaan ogaano qodobada soo socda si aan u helno xigasho sax ah: 1. Tilmaamaha: Inta ay le'eg tahay kubbadda birta ah ee aad rabto waa in marka hore la qiyaasaa;2....
Waa maxay shuruudaha xigashada kubbadda birta?
by admin 21-01-27
Weydiinta, macaamiishu waxay inta badan u yimaadaan oo weydiiyaan: Sidee loo iibiyaa kubbadaha birta?Waa imisa kubbadda birta?Waxaan aaminsanahay in tani ay tahay arrinta ugu muhiimsan macaamiisha.Caadi ahaan ma soo bandhigto odhaah isla markaaba macmiilka, taas oo iyaduna masuul ka ah macmiilka.Maadaama macmiilku aanu xirfad lahayn...
Waa maxay noocyada kubbadaha birta kaarboon?
1. Sida laga soo xigtay maaddada, waxaa loo qaybiyaa kubbadaha birta kaarboon yar, kubbadaha birta kaarboon dhexdhexaad ah, kubbadaha birta kaarboonka sare, qalabka ugu muhiimsan waa 1010-1015, 1045, 1085, iwm.;2. Marka loo eego adkaanta, waxaa loo qaybiyaa kubbado jilicsan iyo kubbado adag, taas oo ah in lagu qiimeeyo in daaweynta kulaylku ay tahay ...
Kubadda birta ee Condar waxay kuu sheegaysaa waa maxay heerka qaadashada kubbadda birta?
Kubadaha birta ah ee sidata waxay leeyihiin darajo badan.Sida ku cad liiska darajooyinka ee heerka qaranka GB/T308-2002, waxa loo qaybiyaa G5, G10, G16, G28, G40, G60, G100, G200, G500, G1000, iwm.G waa xarafka ugu horreeya ee Grade ee Ingiriisiga. , iyo tirooyinka soo socdaa waxay leeyihiin heerar kala duwan.Inta yar ee kabuubyada...
Condar Steel Ball ayaa kuu sheegaysa waxaad samaynayso haddii kubbada birta ahi ay miridhto?
Qof kasta oo isticmaala kubbadaha birta ah iyo kubbadaha birta ah, waxaan aaminsanahay inay la kulmi doonaan dhibaatada kubbadaha birta ee daxalka.Kaydinta aan habboonayn, gaar ahaan kubbadaha birta ee kaarboonka iyo kubbadaha birta sidata, waxa lagu go'aamiyaa waxqabadkeeda - ka hortagga miridhku ma jiro, hawada dheereeya, gaar ahaan humi...
Waa kuma ninka sharafta leh ee kubbadda birta ah?
316 iyo 440 waxay ka tirsan yihiin aristocracy ee kubadaha birta ah, oo leh caabbinta miridhku wanaagsan iyo iska caabin daxalka adag, iyo qiimaha kordho qiimaha.Kubbada Condar Steel Ball ee soo socota waxay si faahfaahsan u soo bandhigaysaa labadan: 1.316 kubbadaha birta ah - 304 ka dib, waa tan labaad ee loogu isticmaalka badan yahay...
Habka wax soo saarka ee kubbadaha birta
(1) Habka wax-soo-saarka fudud ee kubbadaha birta ee xargaha-sawir-qabowga ah waxay kubbadda ka dhigtaa mid madhan → Shiidid fiican (ama turxaan bixin) → shiid aad u fiican...
No. 2, Jialong North Road, Jiaming Industrial Park, Degmada Dongchangfu, Magaalada Liaocheng, Gobolka Shandong, Shiinaha
Hadda Na soo wac:
© Xuquuqda daabacaadda 20102021: Dhammaan xuquuqaha way xifdisan yihiin.
Ku dhufo geli si aad u baadho ama ESC si aad u xidhid